Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Imtixaanka Maaskarada - Warshad Qalabka Tijaabinta Maska Shiinaha
Qalabka Tijaabinta Maaskarada ee keydka ah, bixinta degdegga ah, iibinta tooska ah ee warshadda. Dhammaantood waxay la kulmaan ASTM, BS EN, ISO, YY, GB iyo heerar kale.
Bixi xal hal-joogsi ah.
Maaskarada Mashiinka Tijaabada Fiidiyowga
Codsi: Si loo go'aamiyo in aragtida aragtida hoosta maaskaro ay ka soo baxdo shuruudaha caadiga ah iyo in kale. Heerarka: GB 2890 Ilaalinta Neefsashada, Iskudhicii nooca filter gaaska 6.8 GB / T ...
Tijaabiyaha Baxsiga Maaskarada Difaaca
Codsiga: Mashiinkaan tijaabada maaskaro ayaa ah in lagu tijaabiyo xaddiga baxsiga qayb yar (TIL & IL) ee maaskarada, maaskaro wajiga oo buuxa, qalabka neefsashada iyo maaskaro gaaska. Mabda ': Ku-afuufida saliida ama milixda ...
Maaskaro PM Tijaabiyaha Saamaynta Ilaalinta
Codsiga: Waxaa loo adeegsadaa in lagu tijaabiyo waxtarka waji-ka-ilaalinta maalinlaha ah iyo noocyada kale ee waji-ka-soo-saarka ah ee ka soo horjeedda qodobka `` particulate matter.It '' waxaa lagu dabaqi karaa xarunta baaritaanka aaladda caafimaadka, ilaalinta te ...
Tijaabiyaha Daaweynta Daaweynta Jilicsan
Codsiga: Mashiinkaani waa inuu u ekeysiiyo daaweyn xirashada ka hor mashiinka neefsashada oo leh baaritaanka caabbinta neefsashada ama baaritaanka wax soo saarka miiraha. Mashiinka neefsashada ...